Madaxweynaha Hirshabelle oo ku wareejiyay 1.140,000 oo dollar Guddiga Fatahaadaha Hiiraan - Jowhar Somali news Leader
Home News Madaxweynaha Hirshabelle oo ku wareejiyay 1.140,000 oo dollar Guddiga Fatahaadaha Hiiraan
Madaxweynaha Hirshabelle oo ku wareejiyay 1.140,000 oo dollar Guddiga Fatahaadaha Hiiraan
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si rasmi ah maanta ugu wareejiyay lacag loogu talo galay Fatahaada Beledweyne ee ka kala yimid Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo Jibuuti, iydaoo lagu wareejiyay Guddiga Ganacsatada Fatahaada Beledweyne, waxaana munaasabadaasi goob joog ka ahaa xubno ka tirsan Labada Gole ee Dowlad Goboleedka Hirshabelle, qeybaha kale duwan ee Bulshada Magaalada Beledweyne oo ay hormuud u ahaayeen Dhalinyarada iyo Odayaasha Dhaqanka.
Lacagta lagu wareejiyay guddiga ayaa lix boqol oo kun oo dollar ay ahayd mid ay dowlada Jabuti ugu deeqday wax ka qabashada fatahaadaha halka dowlada federalka soomaaliyana ay shan boqol oo kun oo dollar ay ka timid,sidoo kale lacagtan ayaan aftan kun oo dollar waxaa ku deeqay Guddiga Gurmadka Fatahaaaha heer qaran.
Hadal kooban oo uu ka jeediyay munaasabada Madaxweyne Waare ayaa sheegay in lacagtan ay tahay aan wax badan ka tareyn baahida ka jirta magaalada Beledweyne si loogaga hortago fatahaadaha.
“Wabiga waa in la dhisaa oo la qodaa,buundooyin cusub waa in laga dhisaa si loogaga hortago fatahaadaha ku soo noqnoqda magaalada Beledweyne.”ayuu yiri Madaxweyne Waare.
Lacagta maanta lagu wareejiyay guddiga ayaa ah mid loogu talogalay in fatahaadaha wax loogu qabto hase yeeshee waxa ay lacagtan noqotay mid muddo dheer soo jiitamaysay sidii ay ku gaari lahayd gacanta guddiga fatahaadaha Beledweyne.
wareejinta lacagta fatahaaadaha beledweyne